Ezona mpazamo zopelo ziqhelekileyo | Uncwadi lwangoku
Ezona mpazamo zopelo ziqhelekileyo
Khawufane ucinge ukuba wenze i-resume yakho. Okanye ileta yokugubungela. Ngebhongo, uyithumela kumntu onoxanduva lokukhetha kuba ucinga ukuba uneprofayili ayifunayo. Umntu oyifumanayo, ufunda ikhontrakthi yakho kwaye uchukumisekile. Yile nto kanye babeyifuna. Ke, qhubeka nokufunda ileta kwaye… lo myalezo ulandelayo uyabulela ngobuwena bakho kodwa uyala ukukunika umsebenzi. Kweneke ntoni? Rhoqo, iimpazamo zopelo zenziwa ngaphandle kokuyiqonda, kwaye banokuba nokufumana okanye ukungabi nawo umsebenzi; ukupasa okanye ukungasiqhubi isifundo; okanye ukunika umfanekiso olungileyo.
Ngemihla yakudala, abo babeqwalaselwa "njengababhali" ngokwenyani babekwazi ukubhala kwaye bengazange babhale gca. Kodwa namhlanje unokufumana iincwadi ezipapashiweyo, nokuba ngumbhali omnye okanye ngabapapashi, ezineempazamo eziqhelekileyo zopelo. Zintoni ezi? Ewe namhlanje sithetha ngazo zonke. Ngale ndlela uya kufunda ukuba ungazinikeli!
1 Iimpazamo eziqhelekileyo zoPelo: Musa ukuzenza!
1.1 Ukwahlulahlula ikoma
1.2 Uphi umbala?
1.3 Inyaniso yokuba uya kukuphosa ngaphandle
1.4 Iimpazamo zopelo: Ngaphezulu kwayo yonke into / Ngaphezulu kwayo yonke into
1.5 Inxalenye engahambi "ukusuka kwinxalenye ukuya kwinxalenye"
1.6 Iimpazamo zopelo: Kutheni, kutheni, kutheni, kutheni
1.7 Iimpazamo zopelo: Inqaku "lokugcina" emva kophawu lombuzo okanye inqaku lesikhuzo
Iimpazamo eziqhelekileyo zoPelo: Musa ukuzenza!
Nokuba usemsebenzini, uviwo, incwadi ebhaliweyo okanye nakuwuphi na umbhalo ozihloniphayo, ukuba awufuni ukunika umfanekiso ombi, awuzukukhathalela kuphela iinkcukacha zephepha, indlela ebhalwe ngayo okanye isicatshulwa. Kananjalo le ayinazo iimpazamo zopelo.
Kwaye, ngenxa yoko, kuya kufuneka uyazi zeziphi eziqhelekileyo ezizinikeleyo ukuze kungenzeki kuwe. Ke Qaphela.
Le yimpazamo eqhelekileyo. Nangona kuyinto eqhelekileyo ukuyibona kwimibhalo ebhalwe ngabantu baseLatin America, inyani kukuba eSpain siyayibamba le mania, kwaye kufuneka ipheliswe njengoko inokwenzeka. Ukususela ebutsheni bethu basifundisa ukuba izivakalisi zinentloko kunye nesivisa. Ngandlela thile, babini. Kwaye abaninzi banyanzelisa ukubahlula ngekoma.
I-recipe ye-roscón de nata yenye yezona zinto zibalaseleyo eSpain.
Eli binzana lihle. Ngaphandle kokwahlulahlula ikoma ebulala yonke. Into elungileyo?
Iresiphi ye-roscón de nata yenye yezona zinto zibalaseleyo eSpain.
Akukho ziphumlisi. Kuba awunakho ukwahlula isihloko kwisivisa, yinto engalunganga.
Enye yeempazamo zopelo eziqhelekileyo xa kubhalwa kukungahoyi ukuba iipasts zinezandi. Unyanisile. Kananjalo, kufuneka ukhumbule ukuba izenzi ezikwixesha elidlulileyo zihlala zingamagama abukhali kuba ziphela ngegama kwi-syllable yokugqibela. Kwaye sele siyazi loo nto Amagama abukhali ahlala enesivakalisi ukuba aphela ngo -n, -s, okanye ikhonkco. Ngaloo ndlela: wajonga, waqhwanyaza, ndathetha, ndamanga, ndanqwala, ndathoba ... baya kuba ne-accent. NGONAPHAKADE.
Inyaniso yokuba uya kukuphosa ngaphandle
Ukonwaba kunjalo? Kodwa mhlawumbi ayisiyonto ingako ukuba kuthetha ukuba unomsebenzi okanye awunayo. Kuba ewe, kubonakala ngathi "kwenziwe" kwaye "kwenziwe" kuyafana, kodwa ngokwenyani akunjalo.
Umsebenzi wasekhaya owenziweyo / Umsebenzi wasekhaya owenziweyo
Inye kuphela into eyahlula ezi zivakalisi zibini ngu "h" (kunye nesinye esilahlekileyo kwi "echo"), akunjalo? Nangona kunjalo, intsingiselo yezi zivakalisi zombini yahlukile.
Kwelinye icala, "Umsebenzi wesikolo owenziwe ekhaya" kuthetha ukuba uwugqibile umsebenzi obenawo, oko kukuthi, yesenzi ukwenza.
Kwelinye icala, "Ndikhumbula umsebenzi wam wasekhaya" kuthetha ukuba "ulahle" umsebenzi wakho wesikolo. Ngamanye amagama, ukuba "ubaphosa" emgqomeni, kwinkunkuma, ukuba ubalahlile ...
Njengoko ubona, oko akuthethi ukuba kuyafana. Ukanti yenye yezona mpazamo ziqhelekileyo zopelo ezenziwe.
Iimpazamo zopelo: Ngaphezulu kwayo yonke into / Ngaphezulu kwayo yonke into
Ngaphambili, i-RAE yayikuvumela ukuba unxibe idyasi, kuba yayiqonda ukuba kufuneka ibhalwe kunye. Ngoku, kuya kufuneka uyibhale ngokwahlukeneyo. Ewe ngoba idyasi yinyani efanayo kwisambatho. Kwaye ukuba uyisebenzisa kwibinzana, umzekelo:
Ndithanda kakhulu ivanilla ...
Abantu baya kucinga ukuba unengubo yevanilla, kodwa ayisiyiyo loo nto ufuna ukubonisa ukuba uyayithanda kakhulu idyasi yevanilla.
Nanini na xa ufuna ukubeka nayiphi na into engeyiyo into efanayo nesambatho, iya kwahluka.
Inxalenye engahambi "ukusuka kwinxalenye ukuya kwinxalenye"
Enye yeempazamo zopelo eziqhelekileyo, kwaye enyanisweni kuyabonakala nakubabhali abasele besekiwe, ukubhala ngokwahlukeneyo; Oko kukuthi "ukwahlukana." Njengokuba, Nangona eli gama lithetha "ukwahlula", inyani kukuba into ebhaliweyo kufuneka ihlanganise yonke into.
Ngoku, bakhona abanye "abahlukileyo" ukuba mhlawumbi bohlukene, kodwa ngenxa yokuba igama ngokwalo alithethi ngokufanayo negama elahlukileyo. Amagama amabini asebenza ngokwawo.
Iimpazamo zopelo: Kutheni, kutheni, kutheni, kutheni
Khange sinamathele, kodwa zikho izizathu ezine, okanye kutheni, okanye kutheni. Kwaye nganye yahlukile kwaye ke ukusetyenziswa kwayo kuyindlela ethile. Wazi njani ukuba yeyiphi oyisebenzisayo? Kulungile:
Kutheni: Ihlala isetyenziswa kwizivakalisi ezibuzayo, kodwa oko akuthethi ukuba uhlala usebenzisa amanqaku emibuzo ukuyibeka, inokuthi ingangqalanga. Umzekelo: Kutheni ungandibizanga? / Ndifuna ukwazi ukuba kutheni ungandibizi.
Ngenxa yokuba: ihlala iyimpendulo kwezi zingasentla. Kutheni na ukuba wenze into? Kuba ... Into eyenzayo iyavakala kwibinzana eliza kuchaza into.
Kutheni?: Oku kuhlala kuhamba kunye nenqaku elithile okanye elingagqitywanga. Kutheni, kutheni ... Kwaye kuthetha ntoni? Ewe ungayitshintsha "ngesizathu." Umzekelo: Andisazi isizathu sesimo sakhe sengqondo (andisazi isizathu sesimo sakhe sengqondo).
Kuba: Njengoko besesikuxelele ngaphambili, ngokwahlukana nangokwahlukana, kutheni ukwahluka ngaphandle kokugxininisa kubhekisa kumagama amabini ahlukileyo enza ngokungafaniyo kunokuba sicinga.
Iimpazamo zopelo: Inqaku "lokugcina" emva kophawu lombuzo okanye inqaku lesikhuzo
Ngokuqinisekileyo uqaphele oku ngaphezulu kwesihlandlo esinye. Okanye uyenzile ngokwakho. Imalunga nokubeka isivakalisi phakathi kwemibuzo okanye phakathi kwezikhuzo nasemva nje kokuyivalela, beka ixesha. Ndiyayithanda lento:
Uthi izokuna phi?
Intlungu, injani intombazana!
Uyayazi loo nto Yimpazamo enkulu. Kungenxa yokuba inqaku lamanqaku okugqibela kunye nesikhuzo sokugqibela sele lisebenza njengexeshana. Akukho sidingo sokubeka ngaphezulu. Nangona kunjalo, Enye yeengxaki ezinkulu ezivelayo kuxa, kwisivakalisi, kuphawulwa uphawu lombuzo okanye isikhuzo kwaye kuqala ngonobumba omkhulu ngenxa yokuba indawo yokuqala ikholelwa ekubeni yindawo yokuma ngokupheleleyo. Into enjalo:
Ndiyayenza, kodwa kutheni kufuneka ndiyinxibe le?
Kwakhona sifumana enye yezona mpazamo zixhaphakileyo zopelo, kuba kule meko, inqaku ku-o de ¡alithethi ukuyeka ngokupheleleyo. Inqaku ngaphandle kokungaphezulu, alisebenzi ukuze ubeke oonobumba abakhulu.
Ke, iya kuba: Ewe ndiyafuna, kodwa kutheni kufuneka ndinxibe le?
Kwaye kunjalo umququ wokugqibela iya kuba kukuzibophelela "ezimbini kwenye"
Yibhale ke kakuhle. Oku akwenziwanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ezona mpazamo zopelo ziqhelekileyo
Inqaku elihle. Ndenze iimpazamo ezininzi, enye ineekoma kunye nelokugqibela lamaxesha, enkosi kakhulu ngokulungiswa.
URicardo VMB sitsho
Umxholo wamanqaku ombuzo kunye namanqaku okukhuza embindini wesivakalisi unomdla.Ndifundile kwenye incwadi yopelo ukuba ukubhala ngonobumba ophantsi emva kophawu lombuzo okanye uphawu lwesikhuzo, kuye kwafuneka usebenzise ikoma. Umzekelo: Ndiyakwenza, kodwa kutheni kufuneka ndinxibe lonto?
Akufanelekanga ukuba basebenzise i-tilde ku "ewe"? Kuba iyavuma, ayinemiqathango kwaye kwimizekelo abasinike yona bayibhalile ngaphandle kophawu lwentetho.
Phendula uRicardo VMB
Ukufundwa 6 ngamabali ahlukeneyo kunye nekhephu elininzi
Iincwadi zikaLuz Gabás